Indha shareerka iyo Iskuulada. | Somaliska
Wasiirka waxbarashada ahna madaxa xisbiga liberalka Jan Björklund ayaa ku taliyay in iskuulada sharci loo siiyo in ay ardada ka mamnuucaan xirashada indha shareerka ay qaar ka mid ah gabdhaha Muslimiinta xirtaan. "Waxbaradu waa xiriir, waa iska eegid indhaha, wajiga iyo xiriir. Sidaa darteed waxaan ku talinayaa in aysan fiicneyn in ay ardadu xirtaan dhar qarinaya wajigooda" ayuu yiri Jan Björklund, wasiirka waxbarashada. Sharciga Sweden ee khuseeya ardada xirata indha shareerka ayaan hada cadeyn, ayadoo ay dhacday sanadkii la soo dhaafay in koleej ku yaala Stockholm lagu eedeeyay cunsuriyad markii ay arday ku mamnuuceen indha shareer darteed. Kiis kaas ayaan wali go;aan laga gaarin. [caption id="attachment_564" align="alignright" width="300" caption="Jan Björklund"] [/caption] "Waxaan doonayaa maamulaasha iskuulada Sweden in ay helaan sharci fudud oo kheexan. Waa in aysan u baahan in ay maxkamad fuulaan si ay u ogaadaan sharciga" ayuu intaas ku daray wasiirku. Hay'ada Waxbarashada Sweden (Skolverket) ayaa sanadkii 2003 soo saartay tilmaame sheegaya in haddii iskuul ay u arkaan ardayga waxbarashadiisa in ay saameeyn ku yeelan karto indhashareerka ay ka mamnuuci karaan. Ann-Charlotte Eriksson oo ah gudoomiye ku xigeenka ururka macalimiinta Sweden ayaa soo dhaweysay hadalka wasiirka balse ku taliysay in arinta loo maro wadahal dhex mara ardayga, waalidkiis iyo iskuulka oo aan loo arag arinta mid ardayga cadaadis lagu saarayo. The Local.
Wasiirka waxbarashada ahna madaxa xisbiga liberalka Jan Björklund ayaa ku taliyay in iskuulada sharci loo siiyo in ay ardada ka mamnuucaan xirashada indha shareerka ay qaar ka mid ah gabdhaha Muslimiinta xirtaan.
“Waxbaradu waa xiriir, waa iska eegid indhaha, wajiga iyo xiriir. Sidaa darteed waxaan ku talinayaa in aysan fiicneyn in ay ardadu xirtaan dhar qarinaya wajigooda” ayuu yiri Jan Björklund, wasiirka waxbarashada.
Sharciga Sweden ee khuseeya ardada xirata indha shareerka ayaan hada cadeyn, ayadoo ay dhacday sanadkii la soo dhaafay in koleej ku yaala Stockholm lagu eedeeyay cunsuriyad markii ay arday ku mamnuuceen indha shareer darteed. Kiis kaas ayaan wali go;aan laga gaarin.
“Waxaan doonayaa maamulaasha iskuulada Sweden in ay helaan sharci fudud oo kheexan. Waa in aysan u baahan in ay maxkamad fuulaan si ay u ogaadaan sharciga” ayuu intaas ku daray wasiirku.
Hay’ada Waxbarashada Sweden (Skolverket) ayaa sanadkii 2003 soo saartay tilmaame sheegaya in haddii iskuul ay u arkaan ardayga waxbarashadiisa in ay saameeyn ku yeelan karto indhashareerka ay ka mamnuuci karaan.
Ann-Charlotte Eriksson oo ah gudoomiye ku xigeenka ururka macalimiinta Sweden ayaa soo dhaweysay hadalka wasiirka balse ku taliysay in arinta loo maro wadahal dhex mara ardayga, waalidkiis iyo iskuulka oo aan loo arag arinta mid ardayga cadaadis lagu saarayo.